Hacked dia lalao manokana ho an'ny programmer | Androidsis
Tonga ny mpamorona ny Falcon Pro miaraka amin'ny lalao hacking antsoina hoe Hacked
Manuel Ramirez | | Fampiharana Android, Lalao Android, Tutorials
Joaquim Verges no mpamorona ity lalao vaovao antsoina hoe Hacked ity ary mila izany ianao fahalalana kely momba ny programa afaka mankafy azy amin'ny fahafenoany rehetra.
Verges no mpamorona ilay mpanjifa Twitter malaza ratsy antsoina hoe Falcon Pro, ary izy io dia iray amin'ireo fampiharana Twitter tsara indrindra nanananay tamin'ny Android, saingy noho ny politikan'ny token dia voatery nahavita ny fampandrosoana izy noho ny fetra napetraka.
1 Inona no voajirika?
2 Fanesorana ny ranony rehetra amin'ny hacked
3 Tsy maimaim-poana amin'ny hacked ny zava-drehetra
4 Ahoana ny fampidinana voajirika
5 Fampiharana bebe kokoa avy amin'i Joaquim Verges, mpamorona ny Hacked
Inona no voajirika?
voajirika manadino ny ambadiky ny lalao arcade izay tsy maintsy hialantsika amin'ireo fahavalo marobe na hihazakazaka tsy hitsahatra hisoroka ny karazana sakana rehetra isika.
Ny hacked dia mandeha amin'ny fomba lalao mila vaky loha kely ianao ary izany dia matetika manana vondron'olona mpanaraka mitady zavatra hafa hialana voly. Lalao karazana rote, iray amin'ireo farany noraisiko tamin'ireto andalana ireto izay mila ny fampiasana ny volondavenona efa misy ao amin'ny atidohanay.
Tsotra ny toerana, tokony mamorona sy mihazakazaka programa tsotraNoho izany dia mila mahafantatra kely momba ny fomba fandrafetana azy ianao, ary eto, azo antoka fa maro aminareo no hahafantatra ny fahazoana ny ranony rehetra, satria lalao video tsy mitovy amin'ny zavatra noforonina hafa io.
Fanesorana ny ranony rehetra amin'ny hacked
Ao amin'ny hacked dia misy modely lalao 3. Mitondra antsika amin'ny alàlan'ny maody tantara ny fahasambaran'ny mpianatra iray izay te hamaha ny olan'ny fandaharana hamonjy an'izao tontolo izao, izay matetika no misy, toa an'i Snowden na Assange. Ity fomba ity dia hanolotra dingana samihafa hanolorana fitaovana samihafa.
Ny maody "maimaim-poana" dia manome fidirana amin'ny zava-drehetra ka lalao tsotra dia azo atsangana sy havoaka ao anatin'ny tahiry mitovy mba ahafahan'ny hafa misintona sy milalao azy.
Ny maody "fanamby" dia fomba fifaninanana hametraka anao amin'ny fitsapana amin'ireo mpilalao hafa izany mba hahitana hoe manao ahoana ireo fahaiza-manao nianarana ireo, na dia tsy maintsy lazaina aza fa mila fanavaozana vaovao ity fomba ity mba hiasa tsara.
Tsy maimaim-poana amin'ny hacked ny zava-drehetra
Miaraka amin'ny Modely amin'ny orinasa Freemium manjaka ankehitriny moramora ao amin'ny Play Store, tsy afa-miala amin'izany ny hacked.
Rehefa milalao maody tantara valisoa Hackoins ny mpilalao, izay azo ampiasaina hamoronana sy hitehirizana programa bebe kokoa amin'ny maody "maimaimpoana". Mba hahazoana ny vola vidin'ny lalao dia azo atao amin'ny alàlan'ny fividianana fampiharana izany.
Raiso ny kaonty tokony hataonao manana tobim-pahalalana momba ny programa mba hankafizanao tsara ity lalao ity. Andao lazaina fa tsy lalao ho an'ny rehetra izany, ka mivoaka ny doka.
Ahoana ny fampidinana voajirika
Mba hametrahana voajirika amin'ny terminal Android dia tsy maintsy mandeha ianao amin'ity rohy ity for mandray anjara amin'ny beta. Handray mailaka ianao handray anjara amin'ny vondrom-piarahamonina beta ary izay angatahinao hidirana.
Raha vantany vao ekena ianao dia homena rohy hanjary mpanandrana toy ny any amin'ireo vondrom-piarahamonina beta hafa. Azonao atao ny miditra amin'ny rindranasa mankany amin'ny Play Store avy Ity rohy ity avy hatrany taorian'ny dingana voalaza
Fampiharana bebe kokoa avy amin'i Joaquim Verges, mpamorona ny Hacked
Verges dia mpamorona mamokatra ary naneho ny talentany lehibe ho an'ny fampiharana Android. Efa nolazaiko ny Falcon Pro, mpanjifa Twitter tena tsara, nefa koa izany fampiharana hafa antsoina hoe Flyne.
Flyne dia mpamaky vaovao momba ny fahana vaovao RSS, na dia azo ampiasaina hijerena ny fahana Twitter aza. Fampiharana voalamina tsara izay manaraka ny Falcon Pro ary feno safidy. Manasongadina ny fanatsarana ny takelaka sy ny asa lehibe ananan'ity mpandrindra ity amin'ny Android.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Tonga ny mpamorona ny Falcon Pro miaraka amin'ny lalao hacking antsoina hoe Hacked
Dyson 360 Eye, ilay robot vacuum cleaner azonao fehezina amin'ny findainao
Google Now dia efa mamela ny baikon'ny feo Google OK avy amin'ny efijery rehetra, eny fa na eo amin'ny efijery fanidiana aza